Dagaalo culus oo saaka ka qarxay duleedka Magaalada Belad-weyne ee G/hiiraan | Allbanaadir.com
Home HIRSHABELLE Dagaalo culus oo saaka ka qarxay duleedka Magaalada Belad-weyne ee G/hiiraan
Dagaalo culus oo saaka ka qarxay duleedka Magaalada Belad-weyne ee G/hiiraan
Dagaal culus ayaa saaka waaberigii ka qarxay degaano ku yaalla hareeraha Magaalada Beladweyne ee gobolka Hiiraan kuwaasoo dhexmaraya ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM oo dhinac ah iyo Al-shabaab.
Wararka ayaa sheegaya nin dagaalka saaka uu bilowday ka dib markii ciidamada huwanta ay weerar qorsheysan ku qaadeen degaano ku yaalla duleedka Beladweyne oo ay fariisimo ku leeyihiin xoogaga Al-shabaab.
Dagaalka ugu kulul ayaa ka socda degaanka Beerxaano, iyo degaano ku dhow iyadoo ciidamada dowladu ay doonayaan iney gaaraan degaanka Booco oo Al-shababa ay ku leeyihiin saldhig weyn.
Saraakiisha Ciidanka xoogga dalka ee ku sugan Balaweyne ayaa waxay sheegeen in la jaray Isgaarsiinta degaanada uu dagaalka ka dhacayo.
Abaanduulaha qeybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in howlgalka ay wadaan uu socon doono inta xoogaga Al-Shabaab laga saarayo degaanada ay kaga sugan yihiin duleedka Magaalada Baladweyne.
Goobaha dagaaladu ka socdaan ayaa laga maqlayaa hub culus iyo rasaas xoogan oo la isweydaarsanayo, iyadoo illaa hadda aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalaadan oo si weyn looga dareemay magaalada B/weyne.
Previous articleFaahfaahino ka soo baxaya Haweeney lagu dilay Magaalada Gaalkacyo
Next articleDibed-bax looga soo horjeedo Maamulka G/Banaadir oo Muqdisho ka socda (Daawo Sawirro)